भेटियो कोरोनाभाइरसको कडा भेरियन्ट, १००० गुणा तीब्र गतिमा फैलिरहेकोछ, भेरियन्ट कति खतरनाक छ ? – Ramailo Sandesh
कोरोनाभाइरसको आन्ध्र प्रदेश भेरियन्ट । यो शब्दले सबैलाई त्रसित पारिरहेको छ । कोरोनाभाइरसको यो एक भेरियन्ट कुर्नूलमा सबैभन्दा पहिला भेटिएको र विशाखापत्तनममा हाल फैलिरहेको भाइरसको तुलनामा यो १००० गुणा तीब्र गतिमा फैलिरहेको जानकारी दिएकाे छ।
यो खबरले मानिसहरुले असाध्यै ड राइरहेका छन् र राजनीतिक आँधी आउने सम्भावना पनि जताइँदैछ । यहाँसम्म कि दिल्ली सरकारले आन्ध्र प्रदेश र तेलंगानाबाट आउने मानिसहरुमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ । यस्तोमा प्रश्न यो उठ्छ कि कोरोनाभाइरसको आन्ध्र प्रदेश भेरियन्ट के साँच्चै नै यति शक्तिशाली छ? र विशेषज्ञ यसबारे के भनिरहेका छन् ?
स्वरुप बदलिरहेको यो म्युटेशन दुई तीन महिनाको अवधिमा एक भेरियन्ट बन्ने गर्छ । जब एक भाइरसले बिरामीको लक्षण फेरिदिन्छ तब यो फैलने गती र शरीरमा रोगको असर पनि परिवर्तन हुने गर्छ । ठिक यसै गरी जबदेखि कोरोनाभाइरस अस्तित्वमा आएको छ, यसको सयौं हज्जारौं म्युटेशन भएको छ र तीमध्ये केही भेरियन्ट बनेका छन् ।
तर कोरोनाभाइरसको सबै भेरियन्टबारे चर्चा भइरहेको छैन । तीमध्ये केही तीब्र गतिमा फैलिरहेको छ । निजामाबाद गभर्नमेनट मेडिकल कलेजका डाक्टर मदाला किरण भन्छिन्, ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार आज दुनियाँमा कोरोना भाइरसको सयौं भेरियन्ट छन् तर तीमध्ये हामीले तीनलाई मात्रै गम्भीरताका लागि लिनुपर्छ । त्यो दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल र बेलायती भेरिन्छ । यही भेरियन्टबारे धेरै चर्चा भइरहेको छ । यसबारे अन्य सात भेरियन्ट छन् जसमाथि हामीले निगरानी राख्नुपर्छ । यी सात भेरियन्टमध्ये एउटा महाराष्ट्र भेरियन्ट हो ।’
आन्ध्र मेडिकल कलेजका प्रधानाध्यापक र उत्तरी आन्ध्र प्रदेशमा कोभिड प्रबन्धनका नोडल अफिसर डाक्टर सुधाकर भन्छन्, ‘भाइरसको इन्क्यूबेशन पिरियड (संक्रमणको लक्षण देखिने लाग्ने समय) असाध्यै कम भएको छ । अतितमा सात दिनमा यसको लक्षण देखिन्थ्यो भने अब तीन दिनको समय लागिरहेको छ । कफको समस्या बढेको छ । युवाहरुमा यसको असर देखिएको छ । मृत्युदरको आँकडा पनि बढिरहेको छ । यसरी नै अक्सिजनको आवश्यकता पर्ने बिरामीको संख्या पनि १५ प्रतिशत बढेको छ । समग्र रुपमा हेर्ने हो भने यसको गम्भीर असर परिरहेको छ । यस्तो लाग्छ कि अबको दुई महिनासम्म स्थिति यस्तै रहन्छ ।’
डाक्टर मदाला किरण भन्छिन्, ‘जब हामीले विशाखापत्तनमका ३६ स्याम्पलको परीक्षण गरेका थियौं तब हामीले एक तिहाई स्याम्पलमा महाराष्ट्र भेरियन्ट पायौं। कोरोनाको N440 K​ भेरियन्ट पाँच प्रतिशत स्याम्पलमा पाइयो जबकी A2A नामको भेरियन्ट ६२ प्रतिशत स्याम्पलमा पाइयो । दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल र बेलायती भेरियन्ट विशाखापत्तनममा फैलिरहेको छैन ।’
यी हुन् आफ्नो नाम परिवर्तन गरेर चलचित्र क्षेत्रमा आएका नेपाली अभिनेत्री